Njengesibonelo, ngizama ukukwenza lokhu nsuku zonke nge-blog. Lapho ngibona ukuthi ukuthandwa kwabo okuningi kwe-Facebook kepha hhayi ama-Twitter amaningi, ngizokuphinda ngiphumelele lapho futhi. Uma ngibona ithani lokuphendula nge-Twitter nakuFacebook, ngizoyicindezela kuStumbleUpon. Lapho ngibona ukuthi isihloko sikhula kakhulu, ngizobhala kabanzi ngaleso sihloko, mhlawumbe ngihlele a I-Marketing Tech Radio khombisa ngakho, noma uhlele ividiyo.
Isu elilodwa engilibonile lisebenza ngempela kubhulogi ukwengezwa kwezinhlobonhlobo ze- ukumaketha infographics. Isayithi likhule phakathi kuka-10% no-15% ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ngesici esingeziwe. Njengomphumela, sinezixwayiso esibekelwe zona futhi manje sesibandakanya abaklami bezithombe ukuzakhela ezethu. Eyakamuva ivuliwe ukuthi iselula iyithinta kanjani i-ecommerce bekungumbono engibe nawo ngemuva kokufunda iphepha elimhlophe… ngakho-ke bekungadingeki nokuthi senze ucwaningo!
I-Momentum iyisihluthulelo sokumaketha okuningi kwesiteshi esinqamulelayo, ngakho-ke uma isikhathi sakho eside ungangeza isu elidumile, ngcono imiphumela isiyonke yemikhankaso yakho. Asikuboni nje lokhu ku-inthanethi, sikubona kungekho ku-inthanethi futhi. Uma ukuhweba kuzwakala nezethameli… uthanda UFlo, intokazi eqhubekayo, sibona uchungechunge lwezentengiso ne-Progressive Lady.
Akukhona nje ekumaketheni, noma. Kuliqiniso lempilo ukuthi sidinga ukusika okubi futhi sandise okuhle. Ngidinga ukusika imikhuba yami yokudla futhi ngifunde ukuthi ngingaqhubeka kanjani nokuzivocavoca umzimba. Emsebenzini, ngidinga ukusika amaklayenti angasilaleli noma ukuthola imiphumela, futhi ngisebenze kanzima ekwandiseni ubudlelwano nezinkampani ezilalelayo futhi eziphumelelayo.
Izinkampani eziningi zijwayele futhi zikhululekile ngemizamo ethile yokumaketha ukuthi azimane ziyinqume… noma ngabe zehluleka. Ngicabanga ukuthi kuyindlela yemvelo eyenziwa ngabakhangisi abakhululeka kakhulu ngokuphakathi. Izingqondo zabo zimane zivaliwe kwezinye izindlela. Abakhangisi be-imeyili bathembele ku-imeyili, abathengisi bosesho bathembele kusesho, abakhangisi abakhokhelayo bathembele ezikhangisweni… umbuthano onobungozi ogcina ngokungenamkhawulo emikhankasweni ehlulekile kanye nemali eningi elahlekile.
Ngokuphambene nalokho, abathengisi abaningi abanaki analytics futhi ungazi ngisho nokuthi yini okusebenzayo noma okungasebenzi. Abayeki eminye yemizamo yabo eziteshini. Umkhankaso ngamunye uqala ekuqaleni ngaphandle kokunakekelwa emhlabeni. Lokhu kubenza bangakwazi ukwenza inzuzo ngomfutho abevele bewenzile.
Imithombo yezokuxhumana isinikeza indlela yokwelula isikhathi zonke umkhankaso. Njengoba uDavid Murdico ngikhulume ngamasu wokumaketha ama-video emsakazweni wokugcina womsakazo, sakhuluma ngokuthi kumangalisa kanjani ukuthi sesivele sineqoqo labalandeli nabalandeli. Njengoba ukhulisa inethiwekhi yakho yabalandeli nabalandeli, utshala imali empumelelweni yomkhankaso wakho olandelayo nangecebo lakho lokumaketha lilonke.
Ngamafuphi, lokho kutshalwa kwemali kokulandelayo kwezenhlalo kukhulisa umkhankaso wakho olandelayo… ngaphambi kokuthi uhlele ukuthi kwenziwe! Uma unabalandeli abayi-100,000 abalalelayo futhi bakunikeze imvume yokuxhumana nabo, lokho kungawushintsha kanjani umkhankaso wakho olandelayo wokumaketha? Ngiyethemba yinto oyicabangayo.